Design indlela ezikoleni isetshenziswa kaningi. Uhlose at ekufinyeleleni imiphumela ethile, nokuthuthukisa ikhono ukuhlela imisebenzi yabo. I "project" elithi lisuselwa Latin elisho "iphonswe Phambili" noma "isikhulumi". Okwamanje, ngaphansi kwakhe baqonde ukuthi okwamanje, kodwa kakade indlela wayithola.
Ukufundisa project - kuyinto uhlelo nezenzo zalo thisha, okuhloswe ngaso ukugcwaliseka umsebenzi othize, futhi inquma indima futhi esikhundleni isinyathelo, kubahlanganyeli inqubo, isikhathi nemibandela kudingeka ukubhekana ngempumelelo inkinga. Lokhu ibinzana isetshenziswa uma kubalulekile ukuba aqoke ekuthuthukisweni kanye nasekuqalisweni kokusebenza nezinye, izindlela non-bendabuko nezindlela yokufundisa, ubuchwepheshe obusha imfundo.
Pedagogical iphrojekthi thishela - iyisici esibalulekile womsebenzi yayo isikole yesimanje. Kungaba ezahlukene ngokuhambisana nohlobo: .. Creative, ucwaningo, imidlalo, ulwazi, umkhuba ngamakhasimende, njll Ngaphezu kwalokho, lo msebenzi kungaba kwenziwe noma nguthishela nobe umfundi noma iqembu abafundi ngaphansi kokuqondisa uthisha. Ngokusho isakhiwo, ukuthi kwande ukuthi kube encane, hhayi ningi than Amakhasi 30-40. Ukwenza efana nezidingo ezisebenza izifushaniso noma imibiko.
Ukuze ubhale iphrojekthi Pedagogical, ukuqala ukukhetha isihloko. Ngakho-ke, ucwaningo abafundi ngokuvamile abakhethiwe zomlando indaba ephathwayo. Kunomthelela kuqiniswa kwezibopho nomkhaya (ngokuvamile iqoqa ulwazi mayelana izihlobo, ubuqhawe babo, kanye nabanye.), Futhi ngempumelelo imfundo yokushisekela izwe.
Ngo pre-school izikhungo futhi wasebenzisa leli umsebenzi. Ukufundisa iphrojekthi umfundisi ungakhuluma mayelana nezindlela ezintsha kanye namasu ezisetshenziswa emsebenzini wabo futhi kungaba wusizo ozakwabo, ngoba siyasebenza ngempela. Ukubhala ke, ekuqaleni udinga ukukhetha isihloko osithandayo umcwaningi.
Ngaphezu Esethulweni nasesiphethweni, iphrojekthi Pedagogical lu- aqukethe izahluko ezimbili, enye yazo iqukethe ithiyori, kanye nezinye - lo mkhuba. Ingxenye yokugcina uchaza izindlela ngokuhlola noma amasu emsebenzini futhi ukusebenza kwabo. Ukwethulwa uchaza emigomweni ebekwe umcwaningi. Kukhona, ezimweni eziningi umbono ocatshangelwayo ukuze angaphikiswa noma wabonakalisa ngezimanga imisebenzi. Ayazise kule iphepha, imifanekiso, izithombe, namashadi namagrafu ebonakalisa ukusebenza imisebenzi. Abakwazi usetshenziswe njengoba isicelo noma kwengezwe ingxenye esisebenzayo.
Ukufundisa project - indlela ephumelelayo ukufundisa izingane indlela cwaninga futhi sithuthukise amakhono abo professional. Le ndlela ingasetshenziswa ukusebenza nezingane bobudala obuhlukahlukene.
Ibhethri yokuphendula: ukubuyekezwa, ama-specs. Ibhethri elihle lemoto